नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनमा नेकपा एकीृकत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड अतिथि ! — SuchanaKendra.Com
नेकपा एमालेको १० औं महाधिवेशनमा नेकपा एकीृकत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड अतिथि !
नेकपा एमालेको १०औं महाधिवेशनमा नेकपा एकीृकत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई निम्ता दिइएको छ ।
एमालेले आफ्नो महाधिवेशनको उदघाटन शत्रमा शुभकामनाका लागि प्रचण्डलाई निम्ता पठाएको हो । एमाले महाधिवेशन आगामी १० देखि १२ मंसिरसम्म चितवनमा हुँदैछ ।
केही दिनअघि सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्डले आफूलाई चुनौती दिन आफ्नो गृहजिल्लामा एमाले अधिवेशन आयोजना गरिएको टिप्पणी गरेका थिए । प्रचण्डले यसअघि एमालेको आठौं र नवौं महाधिवेशनमा उपस्थित भएर शुभकामना दिएका थिए । यसपटक समेत निम्ता आएको भए पनि जाने नजानेबारे प्रचण्डले आफ्नो सचिवालयका सदस्यलाई समेत बताएका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण खारेज गरेपछि दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डबीच केहीपटक टेलिफोन संवादबाहेक प्रत्यक्ष कुराकानी भएको छैन । त्यसयता दुवै नेताले सार्वजनिक रुपमा एकअर्काप्रति तीतो पोख्दै आएका छन् ।
प्रचण्डलाई बोलाए पनि एमालेबाट अगल भएर एकीकृत समाजवादीको नाममा नयाँ दल निर्माण गरेका माधवकुमार नेपाललाई भने महाधिवेशनमा निम्ता दिइने छैन ।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख समेत रहेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले एकीकृत समाजवादीलाई एमालेले नचिन्ने बताए । उनले एकीकृत समाजवादी पार्टी अवैध भएकाले महाधिवशेनमा बोलाएर मान्यता दिने काम नहुने स्पष्ट गरे ।